Hira gasy makotrokotroka : Lasan’Ambohimandroso ny amboara
10/09/2018 admintriatra 0
Dingana farany. Nifarana omaly rehefa naharitra 6 herinandro ny fifaninanana hira gasy makotrokotroka. Tamin’ireo tarika 10 niatrika ny fifaninanana, dia tarika roa no niatrika ny famaranana omaly tetsy amin’ny kianjan’Ambohijatovo. Mbola manana ny anjara toerany …Tohiny
Tanora Malagasy : Liana amin’ny kolontsaina Japoney
Hajao ny an’ny tena fa fantaro ny an’ny hafa. Anisan’ireo seho nisongadina ny faran’ny herinandro teo ny jery manokana momba ny sarimihetsika Japoney tetsy amin’ny Institut Français de Madagascar na ny IFM Analakely. Tsikaritra fa …Tohiny
Madagasikara – Sénégal : Hipoka ny kianjan’i Mahamasina
Niady hatramin’ny farany. Mbola nanaporofo ny fitiavany baolina kitra ny Malagasy omaly nandritra ny lalao nihaonan’i Barean’i Madagasikara sy ny liona senegaley. Hipoka tanteraka ny kianjaben’i Mahamasina ary mihoatra ny tokony ho zakany azy. Nahatratra …Tohiny
Lisea Arivonimamo : Nahazo solosaina
Manaraka ny fivoaran’ny teknolojia. Ivelan’ny fampianarana ataon’ny mpampianatra dia manampy betsaka ny mpianatra amin’ny fiatrehana ny fianarana ny fijerena ireo tahirin-kevitra samihafa. Tafiditra amin’ny fanatrarana izany dia notolorana solosaina 5 ny Lisea Arivonimamo. Fanampiana avy …Tohiny